Categoria:País (Birmanês) - Wikcionário
» Todos os idiomas » Birmanês » Entradas por rubrica » Ciência » Geografia » Topónimos » Países
Esta categoria contém verbetes de nomes de países no idioma birmanês.
Ver também: Categoria:Gentílico (Birmanês).
Países em birmanês localizados na Ásia
ကမ္ဘောဒီးယား • ကာဂျစ္စတန် • ကာဇက်စတန် • ကာတာ • ကူဝိတ် • ဂျပန် • ဂျော်ဂျီယာ • ဂျော်ဒန် • စင်ကာပူ • ဆိုက်ပရပ်စ် • ဆီးရီးယား • ဆော်ဒီအာရေဗျ • တရုတ်ပြည် • တာ့ခ်မင်နစ္စတန် • တာဂျစ်ကစ္စတန် • တူရကီ • တောင်ကိုရီးယား • ထိုင်း • ထိုင်ဝမ် • နီပေါ • ပါကစ္စတန် • ပါလက်စတိုင်း • ပါလက်စတိုင်း • ဖိလစ်ပိုင် • ဗီယက်နမ် • ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် • ဘရူနိုင်း • ဘာရိန်း • ဘူတန် • မကာအို၊ တရုတ်ပြည် • မြန်မာ • မြောက်ကိုရီးယား • မလေးရှား • မွန်ဂိုးလီးယား • မော်လဒိုက် • ယီမင် • ရုရှား • လက်ဘနွန် • လာအို • သီရိလင်္ကာ • ဟောင်ကောင်၊ တရုတ်ပြည် • အင်ဒိုနီးရှား • အစ္စရေး • အဇာဘိုင်ဂျန် • အရှေ့တီမော • အာဖဂန်နစ္စတန် • အာမေးနီးယား • အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု • အိန္ဒိယ • အိုမန် • အီရတ် • အီရန် • ဥဇဘက်ကစ္စတန်
Países em birmanês localizados na Europa
ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ • ချက်သမ္မတနိုင်ငံ • ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ • ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ • ဂရိနိုင်ငံ • စပိန်နိုင်ငံ • ဆန်မာရီနိုနိုင်ငံ • ဆလိုဗားကီးယားနိုင်ငံ • ဆလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံ • ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ • ဆွီဒင်နိုင်ငံ • ဆားဘီးယားနိုင်ငံ • ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ • တူရကီနိုင်ငံ • နယ်သာလန်နိုင်ငံ • နော်ဝေနိုင်ငံ • ပြင်သစ်နိုင်ငံ • ပိုလန်နိုင်ငံ • ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ • ဖင်လန်နိုင်ငံ • ဗာတီကန်စီးတီး • ဘီလာရုဇ်နိုင်ငံ • ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ • ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနားနိုင်ငံ • မက်စီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ • မွန်တီနီဂရိုးနိုင်ငံ • မိုနာကိုနိုင်ငံ • မော်လတာနိုင်ငံ • မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံ • ယူကရိန်းနိုင်ငံ • ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ • ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံ • ရုရှားနိုင်ငံ • လစ်တန်စတိန်းနိုင်ငံ • လစ်သူယေးနီးယားနိုင်ငံ • လတ်ဗီယာနိုင်ငံ • လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံ • ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ • အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံ • အင်ဒိုရာနိုင်ငံ • အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံ • အယ်လ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံ • အာမေးနီးယားနိုင်ငံ • အိုက်စလန်နိုင်ငံ • အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ • အီတလီနိုင်ငံ • ဩစတြီးယားနိုင်ငံ
Países em birmanês localizados na Oceania
ကီရီဘတီနိုင်ငံ • ဆမိုးအားနိုင်ငံ • ဆော်လမွန်ကျွန်းစု • တာန်ဂါနိုင်ငံ • တူဗလူးနိုင်ငံ • နယူးဇီလန် • နအူရူးနိုင်ငံ • ပလောနိုင်ငံ • ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ • ဖိဂျီနိုင်ငံ • မာရှယ်ကျွန်းစု • မိုက်ခရိုနီးရှားနိုင်ငံ • ဩစတြေးလျနိုင်ငံ
Páginas na categoria "País (Birmanês)"
Obtida de "https://pt.wiktionary.org/w/index.php?title=Categoria:País_(Birmanês)&oldid=2424279"
Esta página foi editada pela última vez às 16h43min de6de julho de 2017.